कसरी फेला पार्ने हराएको फोन ? फोनका डाटा कसरी मेट्ने ?
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। आफ्नो फोन हराएको वा चोरिएको घटना हामीमध्ये धेरैले भोगेकै हुन्छौँं । कहिलेकाही घरमै कतै आफैं फोन राखिएको हुन्छ, तर खोजी गर्दा भेट्टाउनै गाह्रो पर्दछ । **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंले उक्त स्मार्टफोनसँग paired गरेको स्मार्टवाचको Find My Phone फिचरबाट पनि फोन कतै लुकेको फोन फेला पार्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै यदि फोन साइलेन्समा छैन भने कसैलाई कल गर्न लगाएर रिङटोन बजेको आधारमा पनि घरभित्रको फोन फेला पार्न सकिन्छ ।
फोन स्विच अन गराइएको हुनु पर्दछ र प्रयोगकर्ताले फोनमा गुगल अकाउन्ट साइनइन गरेको हुनुपर्दछ ।
त्यस्तै फोनमा मोबाइल डाटा वा वाइफाइ चलेको हुनुपर्दछ, गुगल प्लेमा देखिएको हुनुपर्दछ, लोकेसन सेटिंग्स अन हुनुपर्दछ भने Find My Device सेटिंग्स पनि बन्द रहेको हुनुहुँदैन । यदि उल्लेखित सबै पूर्वशर्तहरु सहितको तपाइँको एन्ड्रोइड फोन हराएको हो भने फोन फेला पर्नका लागि निम्नानुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस् :
कुनैपनि डिभाइसमा android.com/find लगइन गरी फोनमा पनि प्रयोग गरेको आफ्नो गुगल अकाउन्ट साइन इन गर्नुहोस् । साइन इन गरिसकेपछि तपाईंले आफ्नो फोनको विवरण बायाँ किनाराको माथिपटि्ट देख्नहुनेछ ।
यदि एउटै अकाउन्टबाट धेरै फोनमा लगइन गर्नुभएको हो भने त्यसमध्ये हराएको फोन छान्नुहोस् । त्यसमा फोनको ब्याट्रीलाइफ देखि कुन समयमा हराएको लगायतका सबै विवरण देखिन्छन् ।
त्यस्तै तपाईंले फोनमा रहेका सबै डाटा डिलिट गर्नका लागि Erase Device अप्सन पनि छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा तपाईंको हराएको फोनका सबै डाटा स्थायी रुपमै डिलिट हुन्छन् । त्यसपछि Find My Device फिचरले पनि काम गर्दैन । यदि तपाईंको फोनको स्वीच अफ गरिएको छ वा फोनमा डाटा वा वाइफाइ कनेक्ट छैन भने चाहिँ तपाईंले यसरी डाटा डिलिट गर्न सक्नुहुन्न ।